ကျွန်တော် Reviews တွေ မရေးတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ပေမဲ့ Page ကို Likes 10,000 ပြည့်သွားခြင်း အထိမ်းအမှတ်ရယ် ဟိုတစ်နေ့က မှ ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ယခုထိတိုင် စိတ်ကူးတွေထဲမှာရော နှလုံးသားထဲမှာပါ ဝင်ရောက်နေတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားကို ပြောပြချင်တဲ့ စိတ်ရယ် တိုက်ဆိုင်သွားပြီး The Theory of Everything ကို ကျွန်တော် ယခုရေးလိုက်ပါတော့တယ်။
ဒီကားကို ကျွန်တော် အရမ်းကြီး ညွှန်းပြနေစရာ မလိုဘူးလို့အရင်ဆုံးတွေးမိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတေ့ာ လူတိုင်းနီးပါးလည်း ကြည့်ပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင် ဒီနှစ် Oscar ပေးပွဲမှာ Best Actor ဆုကို ဆွတ်ခူးနိင်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တယ်ဆိုတာ ရုပ်ရှင်ချစ်သူတိုင်း သိပြီးဖြစ်နေကြလို့ပါ။
Stephan Hawking လို့ ပြောလိုက်ရင် မသိတဲ့သူ မရှိနိုင်ပါဘူး။ ယနေ့ခေတ်ရဲ့အတော်ဆုံးနဲ့နာမည်ကြီး အောင်မြင်ဆုံး Theoretical Physicists တွေထဲမှာ တစ်ယောက် အပါအဝင်ဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဒါဆို သူ့အကြောင်းကို လူအများစု သိပြီးသား ဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင် မမှားပါဘူး။ ဒါဆို ယခုလို သိပြီးသား လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝအကြောင်းကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြတော့ ယခုလို အောင်မြင်ခဲ့လည်း? တစ်ကယ်တော့ Biopic ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားမျိုးတွေဟာ ယနေ့ခေတ်မှာ အောင်မြင်မှု နည်းပါး သလို စိတ်ဝင်စားမှုလည်း နည်းပါးလာကြပါတယ်။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် The Iron Lady ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကိုတောင် ကျွန်တော့ သဘောမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ ဒါဆိုဘာကြောင့် ယခုဒီကားကို ကျွန်တော် အလွန်နှစ်သက်ခဲ့ရတာလည်း? တေစ်ခုတည်းသော အဖြေကတော့ Biopic ရုပ်ရှင်အများစုမှာ ကင်းမဲ့နေတဲ့ နှလုံးသားဆိုသော အရာလေးကို အခြေတည်ပြီး အချစ်ဆိုတဲ့ နူးညံတဲ့ ပျားရည်လေးနဲ့ဆမ်းထားခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်သောကြောင့်ပါ။
England နိုင်ငံရဲ့Cambridge University မှာ Astrophysics ပညာရပ်ကို သင်ကြားနေခဲ့တုန်းက Stephen Hawking ဟာ အသက် 21 နှစ်ပဲရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ 1963 ခုနှစ်ရဲ့ ညနေခင်းလေးတစ်ခုမှာ စာပေဘာသာရပ်ကို သင်ကြားနေသော Jane Wilde ဆိုသော ကျောင်းသူလေးကို သူ စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မြင်မြင်ချင်းပဲ ချစ်မိသွားတယ်လို့ပဲ ဆိုရမလားပဲ။ ကျောင်းစာတွေကိုပဲ အမြဲလေ့လာနေတဲ့ သူ့အတွက်တော့ ထိုကောင်မလေးဟာ အချစ်နတ်သမီးလေးတစ်ပါး ပါပဲ။ ရိုးသားတဲ့ လူငယ်များ ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ နှစ်ဦးစလုံး သူတို့ရဲ့ကနဦး အချစ်တွေမှာ သာယာခဲ့တာပေါ့။
Stephen က ဉာဏ်ကောင်းပြီး အတန်းထဲက တစ်ခြားကျောင်းသားတွေထက် သိသာစွာ ပိုမိုတော်နေပေမဲ့ နောက်ဆုံးနှစ်အတွက် ရေးတင်ရမဲ့ ကိုယ်ပိုင် Thesis အတွက် Topic ကို သူရှာမတွေ့သေးလို့ သူ့ရဲ့အတန်းဖော်တွေသာမက ဆရာကပါ စိတ်ပူခဲ့ကြတယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ Black Hole အကြောင်းကို ရှင်းပြခဲ့တဲ့ Lecture တစ်ခုကို သူနဲ့သူ့ဆရာ သွားတက်ရောက်ပြီးတဲ့ အခါမှာောတ့ Stephen တစ်ယောက် သူ့Thesis ရဲ့Topic ကို ရသွားခဲ့တယ်။ ထိုအရာကတော့ ကျွန်တော်တို့စကြာဝဋာကြီး စတင်ဖြစ်တည်လာပုံသမိုင်းကြောင်းမှာ Black Holes တွေကလည်း ပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ကံမကောင်းလှတဲ့ Stephen တစ်ယောက် အတန်းတက်ဖို့ပြေးအသွားလမ်းတစ်နေရာမှာ ခြေထောက်တွေ ခွေယိုင်ကာ ချော်လဲသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ ဆေးရုံတင်ပြတော့မှ သူ့မှာ Motor Neuron Disease ဆိုတဲ့ ကြွက်သားတွေလှုပ်ရှားနိင်မှု လျော့နည်းလာတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုး ရရှိနေပြီဆိုတာ စိတ်မကောင်းစွာ သိခဲ့ရတယ်။ အသက်ရှင်လှ နောက်ထပ်2နှစ်ပဲ ဆိုတဲ့ ဆရာဝန်ရဲ့စကားကြော်င့ သူစိတ်ဓာတ်တွေ ကျဆင်းခဲ့ပြီး အခန်းတွင်းအောင်းကာ အရင်ကလို အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့လည်း မတွေ့တော့တဲ့ အပြင် Jane ကိုလည်း တွေ့ရမှာ ရှောင်ဖယ်လာပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဖြစ်မှန်ကို သိသွားတဲ့ Jane က သူမနဲ့အတူ အပြင်မှာ လိုက်ထွက်မကစားဘူးဆိုရင် သူမ သူ့ထံ တစ်သက်လုံးပြန်မလာတော့ဘူးဆိုတော့ အရင်လို မသန်တော့တဲ့ သူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေနဲ့သူအသည်းအသန် ထရသည်။ သူမကို ချစ်လွန်းသောကြောင့် အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ပေ။
အချစ်စစ်ဆိုတာကို ယုံကြည်တဲ့ Jane တစ်ယောက် ရှေ့အနာဂတ်တွင် ဘယ်လို အဟန့်အတားတွေပဲ ရှိနေ ရှိနေ ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်တွေနဲ့သူမ Stephen လက်ထပ်ခြင်းဆိုသော ဘဝရဲ့စွန့်စားခန်းတစ်ခုကို စတင်လိုက်ပြီးနောက် .....
သူမ ဘဝကို အရှုံုးပေးလုနီးပါးတွေ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ဆိုးသထက်ဆိုးလာသော အခြေအနေတွေကို သူမတစ်ယောက်တည်း ခါးစည်းခံခဲ့ရသည်။
အစက သူမ သည်းခံနိုင်မည်ဟု ကြိုတင်တွက်ဆထားသောအရာများသည် လက်တွေ့တွင် ခက်ခဲသော အရာများအဖြစ် အသွင်ပြောင်းသွားသည်ကို သူမရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။
သူမ ရဲ့မိန်းမသားပီပီ ပြင်းပြတဲ့ ဆန္ဒတွေကို မျိုသိပ်ခဲ့ရသည်။
သူမ အတတ်နိင်ဆုံး Stephen ကို ပါရမီ ဖြည့်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
ဒါပေမဲ့ သူတို့နှစ်ဦးသား ပေါင်းစည်းတည်ဆောင်ထားသော ဘဝလေးတစ်ခုရဲ့အချိးအကွေးလေးတစ်ခုဟာ နိဂုံးပမာ ဖြစ်လာသောအခါ....
Director James Marsh ရိုက်ကူးထားပြီး Stephen Hawking အဖြစ် Eddie Redmayne က သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး Eddie က ဒီကားနဲ့ပဲ ဒီနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံး မင်းသား ဇာတ်ဆောင် Oscar ဆုကို အောင်မြင်စွာ ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ Jane အဖြစ်ကတော့ Felicity Jones က သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး Oscar လျာထားခံခဲ့ရပေမဲ့ Still Alice ထဲက Julianne Moore က ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ Jane Wilde Hawking ကိုယ်တိုုင် ရေးသားခဲ့တဲ့ Travelling to Infinity: My Life with Stephen ဆိုသော ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိ ကို အခြေခံထားပြီး Anthony McCarten က ဇာတ်ညွှန်းပြန်လည် ရေးသားခဲ့တာပါ။ Anthony McCarten က3နှစ်နီးပါးကြာအောင် Jane Wilde Hawking ထံမှ ဇာတ်ညွှန်းရေးသားခွင့်ရရန် တောင်းဆိုခဲ့ရပါတယ်။
ဒီကားမှာ အကြိုက်ဆုံးအချက်တွေကို ပြောချင်တာက တင်ပြပုံနဲ့သရုပ်ဆောင်မှူ။ တင်ပြပုံလေးအရမ်း ကောင်းမွန်လွန်းသောကြောင့် ကြည့်နေရင်းနဲ့ဒီကားလေး ပြီးသွားမှာကို နှမျောနေမိတယ်။ စိတ်ထဲက ကြိတ်ပြီး မပြီးပါစေနဲ့အုံးလို့ဆုတောင်းနေမိတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ? လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝအကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားအောင် ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့လို့ပေါ့။ ဘာကြောင့် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေရသလည်းလို့မေးလာရင် အဓိက ချီးကျူ းချင်မိတာ သရုပ်ဆောင် နှစ်ယောက်ရဲ့အလွန်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ပဲ။ သူတို့နှစ်ယောက်ပဲ ဇာတ်လမ်းကို သယ်ဆောင်သွားတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကပဲ ထိုသူတို့ရဲ့ဘဝကို ထင်ဟပ် ပြသပေးသွားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် ဒီနှစ် မင်းသားဆု လျာထားခံခဲ့ရတဲ့ ရုပ်ရှင်5ကားစလုံးကို ကြည့်ပြီးနောက် Eddie ရဲ့သရုပ်ဆောင်မှုု ပြောင်မြောက်မှုုကြောင့် မင်းသားဆုကို ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ ချွင်းချက်မရှိ လက်ခံမိခဲ့ရတယ်။
ကြွက်သားတွေ သေလာပြီး နောက်ဆုံး လှုပ်ရှားလို့မရတော့သော Stephen
နောက်ဆုံး စကားပါ မပြောနိုင်လာသော Stephen
ထိုအရာတွေ အားလုံးကို သဏ္ဍာန်တူအောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သော Eddie ..
ဒီကားကို ကျွန်တော် နောက်ထပ် နှစ်သက်မိတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ Stephen နဲ့Jane တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့ ဒုက္ခတွေကို တလေးတစား ဂုဏ်ပြုထားနိုင်ခဲ့လို့ပဲ။ ထို့အပြင် Director သည် ဒီဇာတ်ကားကို ဆုတွေ ရရှိအောင် တမင် ဖန်တီးထားတဲ့ ဇာတ်ကွက်တွေကို ကျွန်တော့်မတွေ့ခဲ့ဘူး။ သာမာန်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပဲ သူရိုးရှင်းစွာဖန်တီးခဲ့သည်။ ဒါကိုပင် စစ်မှန်သော အနုပညာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆုတွေ ရရှိခဲ့တာကတော့ ဇာတ်ကားကိုကပင် ကောင်းမွန်နေသောကြောင့်ပါ။
ဒီဇာတ်ကားကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော် ကြိတ်ပြီး မျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့ အခန်းလေးတွေ4ခန်းထိရှိခဲ့ပါတယ်။ ခုထိလည်း မှတ်မိနေတယ်။ စိတ်ထဲမကောင်းလွန်းလို့။
Jane အကူအညီလိုအပ်နေတာကို သူနားလည်တယ်လို့အိပ်ယာလေးထဲမှာ Stephen ပြောခဲ့တဲ့အခန်းလေးရယ်..
စကားမပြောနိုင်တော့လို့ အရောင်လေးတွေနဲ့ရွေးပြီး မိမိပြောချင်သော စကားလုံးတွေကို ရွေးချယ်ရတဲ့ စက်ကလေးကို Jane တစ်ယောက် Stephen ကို သင်ပြနေတဲ့အချိန်မှာ Jane ရဲ့မျက်ဝန်းက ကျလာတဲ့ မျက်ရည်စတွေ .. လှုပ်ရှား၍မရတော့တဲ့ Stephen ရဲ့ နှုတ်ခမ်းပါးက စကားလုံးတွေကို Stephen ရဲ့မျက်လုံးမှာ ပေါ်နေတဲ့ အခန်းလေးရယ်...
"ကျွန်မ ရှင့်ကို ချစ်ခဲ့ပါတယ်" ဆိုတဲ့ အရာ အားလုံးကို သူတို့လက်လျော့လိုက်ကြတဲ့ အခန်းလေးရယ်...
နောက်ဆုံး တင်ပြသွားသော အခန်းလေးရယ်ပါ။
ထို့အပြင် ဒီဇာတ်ကားလေးကို နှလုံးသားလေးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြန်တယ်။
တစ်ကယ်တေ့ာ ဒီဇာတ်ကားလေးဟာ မမေ့နိုင်သော ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ရာ အချစ်တွေနဲ့ ဖြည့်ဆည်းထားခဲ့ပြန်တော့တယ်။
အကယ်၍ သင်သာ အချိန်တွေကို နောက်ပြန်ဆုတ်လို့ရခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်ဘဝရဲ့ဘယ်အချိန်ကို ပြန်လည်သွားချင်ပါသလဲ?
Stephen သွားချင်ခဲ့တဲ့ အချိန်လေးကတော့...
ထို့အတူပဲ ကျွန်တော့်မှာလည်း ကျွန်တော် ပြန်သွားချင်တဲ့ အချိန်လေးတစ်ခု ရှိခဲ့တာပေါ့ဗျာ။
" There should be no boundaries to human endeavor. We are all different. However bad life may seem, there is always something you can do, and succeed at. While there's life, there is hope."